असार ३१ गते कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल – ramechhapkhabar.com
असार ३१ गते कस्तो रहला तपाईंको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल
पढाई लेखाईमा मन जाने हुनाले नतिजा आफ्नै पक्षमा पार्न सकिनेछ । राजनिति तथा समाजसेवामा जनताको गतिलो समर्थन रहने हुदा पद प्राप्तीको योग रहेकेछ । आफन्त तथा सहयोगीको साथ पाईने हुनाले कामहरु गर्न जोस जागर बढ्नेछ । माया प्रेममा नजिक हुने समय रहेकोछ । तरपनि बाहिरी वाताबरणको प्रभावले स्वास्थ्यमा समस्या आउँन सक्छ ध्यान दिनुहोला । व्यापार व्यावसायमा मन्दि आउँनेछ ।